Inyaniso, phantse wonke amasiko ikofu eYurophu kunye nehlabathi entshona uvela Italy. Kungenxa yesi sizathu le nto zonke iintlobo zomgangatho wekofu esiselayo sinazo amagama Italian.
Ifunyenwe uhambo lwemizuzu embalwa ukusuka kwizikhululo zikaloliwe zaseMilan e-Itali le Cafe ichazwe ngokuchanekileyo ngegama layo. Kukho iikati ehamba niyijikeleza le cafe zokuba xa wena udle usele. Le cafey emnandi ayidume ngokuba neti ebalaseleyo enikwe ikiti enomthi wekati kunye neebhekile ezimnandi. Abasebenzi banobubele super kwaye uninzi iikati zisoloko belele, lo ke into athanda ukuyenza.
Ukuba ufuna ukubona ukuba mkhulu gqitha coffee Italian, le ndawo ukutyelela. Uluhlu olubanzi coffees kunye namaqebengwana okumnandi ekhaya ukwenza oku coffee ndawo ethandwayo zombini wabakhenkethi nabantu balapha. Le yindawo enkulu ukuba isidlo wathengisa ngento coffees ukuba Euro okanye ngaphantsi. Le shop Ikofu wheelchairs, uye WiFi, i lesilwanyana-friendly, Wayenegama kakuhle imiphako bar utywala. A imizuzu eyi-ezisixhenxe ukusuka kwisikhululo.
Incwadi uhambo lwakho olulandelayo uloliwe usebenzisa Gcina a Isitimela ubone izikhululo zikaloliwe ezininzi Italy.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcoffee-shops-train-stations-in-italy%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#kofu milan Isikhululo sikaloliwe ukhenketho